Home » Creative Writing » သံတောင်ကြီး နောင်ဘူဘော ဆုတောင်းတောင်ဆီသို့ အလည်တစ်ခေါက်
ပုံရိပ်အမှတ် ၁၈ ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ…
မကြာခဏ​ရောက်​ဖူး​ပေမယ့်​…. ဘာမှထူးထူးခြားခြားလည်​ပတ်​စရာ ​နေရာ​တွေမရရှိ​ပေမယ့်​… အိမ်​ကသွားမယ်​ဆိုတိုင်း မငြင်းတမ်းလိုက်​မိတဲ့​နေရာ​တွေ​ပေါ့… :))
ပုံ ၁ က​နေ ၉ အထိက ​သံ​တောင်​ကြီးလမ်းခရီးက ပုံ​တွေပါ။
အားကျတယ် ဝေ ရေ…….
ဒီလို ​အေး​အေး​ဆေး​ဆေးပုံ​လေး​တွေ ရိုက်​ဖို့ ဆိုတာက သာမန်​ ခရီးသွား ရသူ​တွေတွက်​မလွယ်​ပါဘူး ။ ကိုယ်​ပိုင်​ ကားနဲ့ သွားနိုင်​မှ ဆို​တော့ အားကျရုံက လွဲပြီး ကိုယ်​ကိုင်​မစွမ်း​ဆောင်​နိုင်​​သေးပါဘူး
တန်ပါတယ် မဝေရယ် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေလဲရ ပုံကောင်းလေးတွေလဲလှ မိုက်မှမိုက်စ်
ဒုတိယ ပြင်ဦးလွင် တောင်စခန်းမြို့လို့ ကြားဖူးတယ်။တချိန်က မအေးချမ်းလို့ လူတွေ မရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ သဘာဝအလှတွေပေါ့နော်။
စာမဖတ်သေးပဲ.. ပုံတွေစကြည့်ကထဲက.. ဒီတခါတော့ တိုက်တွေဘာတွေနဲ့… နေရာပါလားတွေးနေတာ…
ရှိဆို ..တပ် ရဲ့ သင်တန်းကျောင်းတွေလည်း ရှိတယ် လေ သူကြီးရဲ့
မဝေ နိုင်ငံခြားသားတွေ အတွက် တိုး မလုပ်တောင်မှ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အတွက် တိုးလုပ်သင့်နေပါပြီ ။
မြတ်စောညီနောင်ဘုရားကို ၀င်ဖူးခဲ့ပါတယ်။ မြို့ထဲကိုတော့ မ၀င်ခဲ့ဘူး။ ရန်ကုန်ကို စောစောပြန်ရောက်ချင်ခဲ့လို့ ..
ကျနော့်ကို ဆက်သွယ်ပါမဝေ ကျနော်တို့ ၂ ယောက်ပေါင်းရင်ရလောက်တယ်
အမပြူံးရေ ကျနော်လည်း မူးတာမှ ချာချာကိုလည်နေတာပဲ မူးတာသာ အရေးလုပ်နေရင် ဘယ်မှ တောင် ရောက်မှ မဟုတ်ဖူး
ဆေးသောက်ပြီး မကြာကြာသွားတော့ သိပ်မမူးတော့ဘူး
.ပုံပြင်လေးက ဖတ်လို့ကောင်းတယ် မဝေရေ။ အမကတော့ ခရီးသွားရမှာ တော်တော်ကြောက်တယ်။ ကားမစီးနိုင်၊ ရထားမစီးနိုင်ဘူးလေ။ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် မူးတတ်လို့။ နားစည်ထဲက အရည်က ပြသနာရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဟန်ချက် မထိန်းနိုင်ဖြစ်ပြီး မူးတာတဲ့။ ဆရာဝန်ပြောတာပဲ။ အဲဒီတော့ တော်ရုံနဲ့ ခရီးမသွားဘူး။
သင်္ဘောပုံစံ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Church ကျောင်းကိုကောမရောက်ခဲ့ဘူးလား။ ကြားဖူးတာ အဲသည်နေရာက ဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့လည်းကြားဖူးတယ်။ ကရင်နှစ်သစ်ကူးတောင်လည်းရှိတယ်မဟုတ်လား။